मध्यपूर्वमा दुईदेखि तीन लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउँदै
काठमाडाैँ, साउन २३ गते । खाडी मुलुक अर्थात् मध्यपूर्वमा १५ लाखको हाराहारीमा नेपाली कार्यरत रहेको बताइन्छ । विश्वका अन्य मुलुकसँगै खाडीका मुलुकहरूमा पनि कोरोनाले असर गरेको छ ।
खाडीका मुलुकहरूमा नेपालीको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ र अगामी दिनमा नेपालीहरूको रोजगारीको अवस्था कस्तो रहला ? लगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गोरखापत्र अनलाइनका लागि मुकुन्द गैरेले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) मध्यपूर्वका उप–संयोजक राजेन्द्र अर्याल (जोन) सँग गर्नुभएको विशेष अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।
पछिल्लो समय खाडीलगायत मध्यपूर्वको पछिल्लो अवस्था के छ ? कोरोनाको कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले के–कस्ता समस्या भोग्नुपरेको अवस्था छ ?
पहिलो कुरा कोरोना महामारीको रोकथामको लागि मध्यपूर्वका सबै सरकार र यहाँका संयन्त्रहरू निरन्तर क्रियाशील रहेका छन् । तर कोरोना नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन । विश्वको विकसित देश लण्डनमा कोरोनाका कारण मृत्युदर १५.२५ पुग्दा मध्यपूर्वमा यमनबाहेक अन्यमा सबैभन्दा अधिक साउदी अरबमा १.०६५ र सबैभन्दा कम कतारमा ०.२ ५ रहेको अवस्था छ ।
मध्यपूर्वमा १५ लाखको हाराहारीमा नेपाली रहेको बताइन्छ ? उनीहरूको दैनिकी कसरी चलेको छ ? मध्यपूर्वमा खान बस्न गाह्रो भएका अर्थात् रोजगार गुमाएका नेपालीको तथ्याङ्क कति छ ? जानकारी दिनुहोस् न ।
मध्यपूर्वको आम्दानीको मेरूदण्ड भनेकै कच्चा तेल र व्यापार हो । विश्व नै लकडाउन भएकोले गर्दा यस अवधिमा तेलको मूल्य र बिक्रीमा भारी गिरावटका साथै बाह्य व्यापार पनि धराशायी हुनगयो ।
तसर्थ ती क्षेत्रमा कार्यरत कामदारले रोजगारी पनि गुमाउन पुगे । यस भयावह अवस्थामा मध्यपूर्वमा क्रियाशील गैरआवासीय नेपाली सङ्घ लगायत सङ्घसंस्थाले नेपाली राजदूतावाससँग समन्वय गरी जीवन रक्षार्थ खाद्यान्न वितरण गर्यो, गरिरहेको छ । करिब दुईदेखि तीन लाख नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाउँदैछन् ।
वैदेशिक रोजगार कम्पनीले रोजगारीमा पठाएका कामदारप्रति अधिकांशले आफनो जिम्मेवारबाट पन्छिएको भन्ने दूतावासले विज्ञप्ति जारी नै गरेर असन्तुष्ट जनाएको थियो । के वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू कामदारको समस्यामा गम्भीर हुन नसकेका हुन् त ? पहिला केही देशले त्यहाँ कार्यरत नेपालीलाई आफ्नो देशमा जानको लागि दबाब दिएको भन्ने सुनिने गरेको थियो तर अहिले धेरै कम्पनी खुल्नथाले कामदार काममा फर्कन थाले भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । वास्तविकता के हो ?
अहिले कस्ता खाले कम्पनी, उद्योग, व्यवसाय खुलेका छन् ? त्यहाँका कम्पनीले के भन्ने गरेका छन् ?
बिना तलब आर्थिक अभावमा टिकट किन्न नसक्नुभएका आप्रवासी नेपाली कामदारहरूलाई यथासक्य छिटो स्वदेश पर्काउन पर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । साउदी अरेबियाका विभिन्न कम्पनी, प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत रहँदा साउदी आवासीय अनुमतिपत्र (अकामा) नबनाइएका वा नवीकरण नगरिएका कारण स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक वहिर्गमन भिसा व्यवस्थाका लागि नेपाली राजदूतावास रियादले प्रकृयाको थालनी गरी पीडित नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उद्धार गरिरहेको छ । जुन आफैँमा सराहनीय छ ।
कडाइका साथ वैदेशिक रोजगारी ऐन २०६४ अनुसार जिम्मेवारी बहन गर्न, गराउन आवश्यक छ । अर्काे यथार्थ, यो महामारीले केही कम्पनीहरू उठ्नै नसकिने गरी थलिने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा बिना अध्ययन पुनः कामदारहरू पठाउनु वा आउनु भनेको जोखिमपूर्ण हुनेछ ।